Ny Type Polite dia endritsoratra manafina teny ratsy | Famoronana an-tserasera
Ny Type Polite dia endritsoratra vaovao miavaka amin'ny "fitafiana" na "fieremana" na "fanafenana" teny sasany ratsy feo toa izao: *****. Makà sary an-tsaina kely dia ho azonao ny dikan'io teny io.
La genius ao ambadik'ity hevitra fonosana ity dia ho fanehoan-kevitra, satria ny loharanom-baovao dia tompon'andraikitra amin'ny "fierena" ambanin'ny karazan-teny manjavozavo. Avy amin'ny tranokalany manokana dia azonao atao ny manandrana azy ireo hahita ny fomba hanafenany azy ireo sy hamoronana ilay fahatsapana fa tsy novakiantsika izy io, fa ao an-tsaintsika dia toa misy izany.
Ny Type Polite dia endritsoratra noforonin'ny orinasa teknolojia Finnish TietoEVRY ary iza no tompon'andraikitra amin'ny fanitsiana na fanafenana ireo teny ireo izay mivoaka amintsika indraindray, fa izay izany.
Saingy misy fikasana ao ambadik'izany famoronana izany typeface ary misy ifandraisany amin'ny bullying cyber azon'ireo tanora amin'ny tambajotra sosialy. Izy io dia mitovy amin'ilay tranokala The Polite Type izay ahafahanao mamaky: «endritsoratra malalaka misokatra izay manoratra ny teny manimba mba hisolo azy ireo amin'ny endritsoratra fanampiny. Tianay ny hamorona toerana ho an'ny adihevitra lehibe momba ny fomba hanaovana an'izao tontolo izao ho toerana azo antoka sy misy idiran'ny rehetra.
Raha ny marina, "Ratsy tarehy ianao" lasa "Tsy tsara tarehy nentim-paharazana ianao", raha toa ka manjary manjavozavo tanteraka ny fomba fiteny toa ny **** ka tsy takatra; Na dia voalaza aza izany dia manjary manjavozavo izy ireo fa amintsika kosa dia miseho izay teny izay. Angamba io no tsara indrindra amin'ity typeface natolotrao ity avy amin'ny tranokalanao.
Mampiditra ity endri-tsoratra ity, ankoatr'izay sariohatra vaovao tsy mifantoka, endri-tsoratra OpenType (OTF) hahafahanao mamantatra sy mahita mpisolo teny mety kokoa amin'ny teny sy andian-teny manafintohina ao amin'ny fivarotam-boky izay miasa na ivelan'ny Internet na an-tserasera. Manentana anao izahay hampidina azy io. Ho hitantsika ny fivoaran'ny loharanom-baovao, izay afaka manome betsaka ny azy. Ary raha tsy afaka misintona ianao ity endri-tsoratra quirky avy any IKEA ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ity endritsoratra manafina ny ***** ity dia tsara fotsiny